Markale iyo Socdaalkii Lamagac-baxay Horumarinta Cagaaran - Cakaara News
Markale iyo Socdaalkii Lamagac-baxay Horumarinta Cagaaran
Dhobawayn(CN) Isniin, 30ka Nov. 2015, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hogaaminaya waftigii balaadhnaa ee socdaalkii loogu magac daray Socdaalkii Cagaaraa ama Horumarinta Cagaaran ayaa saaka kaqaybgalkii wareejinta xerada ciidanka difaaca qaranka ee koonfur-barri fadhigiisa 2,aad ee uu kulahaa magaalada qabridahar kadib u ambabaxay qabalaha maraacaato ee degmada qabridahar.
Madaxwaynaha ayaana markii lagaadhay goobtaasi dhagax-dhigay bilawga mashruuca biyo-xidheenka wayn ee qabalaha maraacaato oo ay kubaxayso miisaaniyad dhan 113milyan iyadoo loogu talagalay in mashruucani looga faaiidaysto waraabka dhul-beereed kabadan 3,000 oo hectar. Waxaa intaa dheer, isticmaalka bulshada dagan aagaas iyo waliba xoolahaba.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo shacabka qabalaha maraacaato kulahadlay goobta dhagax-dhiga ayaa sheegay in cid walba oo deegaanka kunool looga fadhiyo inay natiijo kakeento kashaqaynta horumarka cagaaran gaar ahaan dhanka waxsoosaarka beeraha si shacabwaynaha dalka iyo ka deegaankuba uga baxaan saboolnimada oo uu gaar ahaan deegaankeenu u noqdo mid caalamka looga soo shaqa tago.
Dhagax-dhiga kadib waxaa loo socdaalay dhanka degmada Shilaabo. Madaxwaynaha oo qabalee kasta u istaagayay shacabka sida wayn caleemaha qoyan ugu ruxayay soo dhawaynta islamarkaana kulamo wadatashi ah laqaaadanayay shacabka qabaleeyadaas ayaa xili ku beegan duhurkii gaadhay magaalada Shilaabo.
Nasasho yar kadibna, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo uu weheliyo wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka DDSI mudane Khadar Cabdi Ismaaciil iyo mas’uuliyiin kale oo heer deegaan iyo heer gobol isugu jira ayaa kulan laqaatay odoyaasha, hooyooyinka iyo dhalinyarada degmada shilaabo isagoo madaxwaynuhu usheegay shacabka in ujeedada socdaalkan lamagac-baxay Horumarinta Cagaaran ahayd dhagax-dhigyo iyo bilawga biyo-xidheeno waa wayn oo lasoo dhagax dhigay. Kuwaas oo looga faaiidaysan doono dhanka waraabka dhul-beereedka, isticmaalka dadka iyo xoolahaba. Wuxuuna madaxwaynuhu kubooriyay in shacabku utafaxayto siduu dhulka wax ugasoo saaran lahaa waayo caalamka waxaa ugu qaalisan dhul iyo biyo. Labadaana waan haysanaa. Hadii aan ujeedsanana deegaankeenu wuxuu noqon mid caalamka oo dhani usoo shaqatago.
Dhanka kalana, shacabka degmada shilaabo ayaa si wayn usoo dhaweeyay qorshayaasha socdaalkan iyo waliba inay diyaar u yihiin fulintooda.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftiguu hogaaminayay ayaa casar gaabadkii ujeedsaday dhanka degmada Dhooba-wayn iyadoo soo dhawayn kadib lasoo kormeeray biyo-xidheen lagawaday qabalee. Kadibna madaxwaynaha ayaa kulan layeeshay bulshada dhoobawayn oo kawarbixiyay ujeedada socdaalkan iyo waliba kaalinta looga baahan yahay bulshada.